SAM ကို-ဗြိတိန် - ဗီနိုင်းမြင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲ Install လုပ်နည်း
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » installation » ဗီနိုင်းမြင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲ Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းမြင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲ Install လုပ်နည်း
ဒီတစ်ခါလည်းသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်သည်သင်၏မြင်းများအတွက်မွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့မွေးမြူရေးခြံသည်, ရှိဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာကြမ်းတမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းလှပသောမသာရဲ့ မှစ. ရွေးချယ်ဖို့စတိုင်များများများရှိပါတယ်။ ဒါဟာခြံစည်းရိုးကိုတပ်ဆင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မတပ်ဆင်ရသေးလျှင်, သင်သည်သင်၏အနာဂတ်အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းသူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အချိန်ယူလိမ့်မည်။ သင်ကခြံစည်းရိုးကိုယ့်ကိုယ်ကို install သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အတွက်ခြံစည်းရိုးကို install ပါစေဒါကြောင့်ဖြစ်စေ, သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိပါသင့်တယ်။ ဤဆောင်းပါး၏ installation ကိုနည်းလမ်းရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးဦးမည်မြင်းခြံစည်းရိုး.
3. သတင်းအချက်အလက်များအဘို့သင့်ဒေသခံ utility ကိုကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ပါ။
1. Post ကိုအဆင့် (ကကော်လံနှစ်ခုလေယာဉ်ဒေါင်လိုက်လျှင်စစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြုသည်)
လမ်းညွှန်သံလမ်းများအတွက် 2. အထူးဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို
3. က 100 ခြေလျင်တိပ်အတိုင်းအတာ
4. လက်စွဲစာအုပ်တူးစက်ပေါင်း 12 လက်မပါဝါလွန်
5. နိုင်လွန်ကြိုး spool နှင့်အချို့သောသစ်သားသို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာထမ်းဘိုး
6. Hammer နှင့်မြင် (အထပ်သားဓါးသွားကအကောင်းဆုံးပါ)
(ငွေအသို့မဟုတ်ချောင်း) တူးဘို့တွင်းအထိမ်းအမှတ် 7. ရေမှုံရေမွှားဆေးသုတ်
post ကို Size ကို
2 ရထားလမ်း5လက်မ .x5 in.x68 ။ ,3ရထားလမ်း 5in.x5in.x84in ။ ,4ရထားလမ်း 5in.x5 in.x96in ။
post ကို Spacing
အလယ်ဗဟိုတွင်။ (8ft) 96
RaiI Size ကို
1.5 & quote; x5.5 & quote; x192 & quote; သို့မဟုတ်2& quote; x6 & quote; x192 & quote; အမြင့်3နဲ့4နှစ်ဦးစလုံးအတှကျရထားထဲမှာ 54 ဖြစ်ပါသည် - ။ 60in ။ တန်းအထက်
သင်တစ်ဦးဆင်ခြေလျှောမှာခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအမြင့်ကိုပြောင်းလဲခံရဖို့ခွင့်ပြုနိုင်အောင်, သငျသညျ 8 ပေဖို့လမ်းကြောင်းဖြတ်နိုင်ပါ။ အထူးကိစ္စများတွင်, သင်ဝါယာကြိုးတွင်းသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပေမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကူးအပြောင်းဟာချောမွေ့, ပိုကောင်းကကြည့်ရှုသည်။ ထိုပြည်ကိုရုတ်တရက်လေယာဉ်ကနေဆင်ခြေလျှောမှ transitions လျှင်ဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးပိုကောင်းတဲ့အသွင်အပြင်အတွက်ရရှိလာတဲ့, အညီယင်း၏ထောင့်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်။
•အလုပ် layout ကိုဆွဲပါနှင့်သင်လိုအပ်ထောင့်ပို့စ်များကိုတွက်ချက်, တိုင်၏နံပါတ်နှင့် & quote; T က & quote; ပို့စ်များကို။
•ကော်လံ၏ဗဟိုဖို့ string ကိုနေ21/2 လက်မခွင့်ပြုတဲ့ခြံစည်းရိုးလိုင်းဖန်တီးရန်ကြိုးနှင့်တံစို့ကိုသုံးပါ။ မာကု & quote; X ကို & quote; တိပ်ခွေများနှင့်ဆေးသုတ်၏ပေ 100 နှင့်အတူအရာတစျခုစီတူးလိမ့်မည်။ ကော်လံအလယ်ဗဟိုတွင် 8 ပေမှာသတ်မှတ်ထားနှင့်ရထားလမ်း 16 ပေရှည်ကြောင်းသတိရပါ။ သငျသညျလှညျ့လျှင်ဒီတော့သင်က 8 ပေရှည်တဲ့မြို့ပတ်ရထားဧရိယာသို့ရထားလမ်းဖြတ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
•အသီးအသီး & quote မှာလျှပ်စစ်လွန်သုံးပြီး 30 လက်မအရွယ်နက်ရှိုင်းသောအပေါက် Drilling; X ကို & quote; နှင့်လက်ကိုင်အပေါက် digger နှင့်အတူအပေါက် clean ။
•တစ်ကော်လံနှင့်အတူတွင်းထဲသို့ရေအနည်းငယ်ကွတ်ထုတ်ယူပြီးလောင်း pand ထို့နောက်ပေါ်မှာရေအနည်းငယ်ကွတ်ထုတ်ယူထားတော်မူ၏။ ကမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အနည်ထိုင်ပြီးတော့ရွှံ့နှင့်အတူတွင်း backfill ကြပါစို့။ backfilling စဉ်အတွင်းကော်လံ၏ပိုက်စစ်ဆေးပါ။ သင် string ကိုအနီးရှိအနေအထားကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, အစဉ်မပြတ်ကော်လံ၏အောက်ခြေတွင်သင်၏ခြေကိုအသုံးပြုပါ။ ထိပ်ထိပ်တွန်းသို့မဟုတ်ဆွဲထုတ်မထားပါနဲ့။
•တိုင် 8 ဗဟိုကနေခြေဘဝါးနှင့်သံလမ်း 16 ပေရှည်လျားဖြစ်ကြသည်ချထားပါသည်။ ဒါကလမ်းညွှန်ရှိသမျှသည်အခြားသောပို့စ်များကိုတဆင့်သွားဆိုလိုသည်။
•အနည်းငယ်ပို့စ်များကို install လုပ်ပြီးနောက်, သငျသညျကိုသူတို့မှန်ကန်သောအနက်သတ်မှတ်ထားကြသည်သေချာအောင်ရန် post ကိုထိပ်စစျဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မြေပြင်အနေအထားမမှန်လျှင်, ခြံစည်းရိုးတစ်ခုအကူးအပြောင်းလုပ်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကိုညှိပြီးတော့, ပထမဦးဆုံးကိုကိုးကားရေးသားချက်များကို set up ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကော်လံလည်းမြင့်မားသည်မှန်လျှင်, နက်ရှိုင်းတဲ့သူကခေါက်ရန်တူများနှင့်သစ်သားအပိုင်းအစတစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကြောင့်လည်းအနိမ့်မယ့်ဆိုပါကပဲမှန်ကန်သောအမြင့်ကဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်သင်ဖန်တီးထားသောကော်လံအောက်ကအသေးစားအာကာသဖြည့်ဖို့ကော်လံသူ့ဟာသူပေါ်စိုစွတ်သောဘိလပ်မြေနည်းနည်းထားတော်မူ၏။
•ဒါဟာသံလမ်း setting မတိုင်မီ 24 နာရီများအတွက်ဘိလပ်မြေရောဂါပျောက်ကင်းစေသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးတံခါးဝ post ကိုပြွန်မှာရပ်စဲနေတယ်ဆိုရင် post ကိုသို့ထည့်မတိုင်မီတစ်ဦးချင်းစီရထားလမ်း၏အဆုံးတိပ်။ တစ်ဦး PVC ဘိလပ်မြေနှင့်အတူထုပ်အပေါ်ပိုလျှံဘိလပ်မြေနှင့်ကော်ချွတ် Wipe ။
•အသီးအသီးတံခါးကို post ကိုထဲသို့သံမဏိအရက်ဆိုင်ထည့်ပါနှင့်စိုစွတ်သောကွန်ကရစ်နှင့်အတူဖြည့်ပါ။ ဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုမီ, ရှိသမျှတံခါးကိုဟာ့ဒ်ဝဲကော်လံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်သေချာပါစေ။ တံခါးကိုဆွဲထားမတိုင်မီခိုင်မာအောင်ဘိလပ်မြေ 24 48 နာရီစောင့်ပါ။
ဤရွေ့ကားငါသည်သင်တို့၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, မြင်းခြံစည်းရိုး၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်ကြသည်။ သင်ဆဲသငျသညျနားမလညျတစ်ခုခုရှိပါကသင်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုလာနိုငျသညျ။
ဗီနိုင်းမြင်းဓားရေးပြိုင်ပွဲ Installing ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုး၏ installation ကို ဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခြင်း ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံလက်ရန်းခြံစည်းရိုး မွေးမြူရေးခြံလက်ရန်း
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Panel များ Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး Installation လမ်းညွှန်
ဗီနိုင်း Semi ပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်း Picket ခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး Panel ကို Install လုပ်နည်း